Imiphumela ekutshalweni kukahulumeni omusha e-Italy | Ezezimali Zomnotho
UJose recio | | Ibha, Imikhiqizo yezezimali
Vele, amabika amabi ezimakethe zezezimali asezinze e-Italy. Njengomphumela kahulumeni omusha ozokwakhiwa phakathi kwe-5-Star Movement neLa Liga. Kuze kube seqophelweni lokuthi i-premium yobungozi maqondana neJalimane ifinyelele kumaphoyinti angama-185 futhi umehluko phakathi kokukhokhwa yiRoma neMadrid ufinyelela phezulu eminyakeni eyisithupha. Kunoma ikuphi, into eyodwa icacile futhi ukuthi le nto entsha yezepolitiki ingathonya eyakho izimali kusuka manje. Hhayi kuphela maqondana namasheya, kepha futhi nemali engenayo engaguquki kanye nezinye izindlela zokutshala imali.
Isimo samanje esiza okwamanje impilo yezepolitiki e-Italy singakhombisa kakhulu otshalweni lwakho. Okungenani kuze kufike kufayela le- isikhathi esifushane futhi kuze kube seqophelweni lokuthi kungakwenza ulahlekelwe noma uthole imali kuya ngecebo ozolisebenzisa kusukela manje kuqhubeke. Omunye wemiphumela yokuqala ongaba nayo ezimakethe zezimali. Njengoba kwenzeka kulezi zinsuku, ngaphandle kokuthi ukunyakaza akukubi kakhulu, njengoba bekulindelwe kusukela ekuqaleni ngabenzeli abahlukahlukene nabalamuli bezezimali.
Ngalo mqondo, awukwazi ukukukhohlwa lokho umnotho wase-Italy ungowesithathu ye-European Union nakho konke okwenzekayo kuyo kungaba nemiphumela eqondile naseduze kwabaseSpain. Ukuzimela kwayo okuphakathi kukhulu kakhulu futhi konke okwenzeka ezimakethe zase-Italy ekugcineni kudlulela kwezikazwelonke. Ngakolunye uhlangothi, umthelela ongaba nawo ezikhungweni zomphakathi nawo ubaluleke kakhulu futhi kufanele uxazulule imisebenzi yakho ukuze iminikelo yezomnotho oyisebenzisayo ukwenza imali oyongile izuze kusukela manje kuqhubeke ingashabalali.
1 Kwenzekani kuwe okwenzeka e-Italy?
2 Ukuhamba okuphansi emakethe yamasheya
3 Ukusabela emakethe yemali
4 Imali engenayo engaguquki: abasengozini kakhulu
5 Thola amamodeli ahlukile
6 Ukutshalwa kwezimali emafutheni
Kwenzekani kuwe okwenzeka e-Italy?
Imayelana nohulumeni ongathandeki ezimakethe zezezimali ngakho-ke impendulo yabo ayinakuba yinto enhle, njengoba kunengqondo ukuyiqonda. Enye yezimakethe zezimali ezithinteke kakhulu ngokungangabazeki imakethe yamasheya. Lezi zinsuku isiNtaliyane yisijeziso esikhulu kunazo zonke izinkomba zezwekazi elidala. Ngokuncipha kwenani okungaba ngu-1%. Mayelana ne-Spanish equity index, i-Ibex 35, ukunyakaza akukaze kubonwe kulezi zinsuku zokungezwani phakathi kwabenzeli bezezimali. Futhi kunikeze amaphuzu amaphesenti ambalwa kuphela.
Yize kunjalo, okubi kakhulu ezimakethe zamasheya kungaqhamuka ezinsukwini noma emasontweni ambalwa ezayo futhi ngokuya ngohlelo olusetshenziswa yisikhulu esisha sase-Italy. Ngalo mqondo, kufanele wazi konke okwenzeka kule ngxenye yeYurophu. Lapho amanani omkhakha wezezimali namabhange jikelele angalimaza kakhulu yilezi zinhlelo zepolitiki ezakhiwe nguhulumeni waseMovimiento 5 Estrellas naseLa Liga. Azilahliwe amathonsi esikhwameni wokujula okuthile okungathatha ama-euro amaningi endleleni uma uvula izikhundla emakethe yamasheya kulezi zinsuku.
Ukuhamba okuphansi emakethe yamasheya
Vele, yisimo esingalindeleka kakhulu uma amaqembu amabili ezepolitiki esebenzisa uhlelo lwawo kusuka manje. Kunoma ikuphi, kuzodingeka hlola ubude bayo namandla ukukala ukuthi kufanele yini ukubeka engcupheni ukuvula izikhundla kulezi zimakethe zezimali. Ngaphandle kwesimo sobuchwepheshe ukuthi izikhwama zikhona ngalesi sikhathi esiqondile. Isincomo esiwusizo kakhulu kulezi zinsuku ukuthi uhlale kude nezimakethe ukuze uhlaziye ukuthi ukuvela kwabo kuyini kusukela manje.
Enye into okufanele uyihlole ukuthi ukuguquguquka izokhula kakhulu kakhulu kusukela manje kuqhubeke. Ngomehluko obanzi phakathi kwamanani aphezulu nesezingeni eliphansi nokuthi uma kungathakazelisa kakhulu ukwenza imisebenzi yokuhweba. Kodwa-ke, kuzofanele ulethe ulwazi oluningi esigabeni sesimo ukuze imisebenzi ithuthukiswe ngempumelelo ukwedlula kwezinye izikhathi. Akumangalisi ukuthi okushiwo abanye babahlaziyi abadumile bezezimali ukuthi ungalahlekelwa okungaphezulu kwenzuzo ngokuvula izikhundla kulezi zinsuku. Ungakhohlwa uma ungafuni izimanga ezingezinhle ngaphambi kokuqala iholide lakho.
Ukusabela emakethe yemali
Vele, enye yezimpahla zezimali ezisengozini kakhulu kulokhu kwakhiwa kukahulumeni e-Italy yimali. Kuze kube seqophelweni lokuthi enye yezinto ezihamba phambili kulezi zinsuku. Ikakhulu, maqondana nezinguquko eziqondile phakathi kwedola laseMelika ne-euro. Ngokunyakaza okungazelelwe okusetshenziswa abaqageli ukuthola inzuzo enkulu ekusebenzeni kwabo ezimakethe zemali. Akumangalisi ukuthi amandla emali yase-United States angenye yezinto ezivamile kulezi zinsuku kanye nezindaba zalokho okwenzeka e-Italy.
Komunye umthambo, kufanele kuphawulwe ukuthi le makethe ekhetheke kakhulu yezezimali ithambekele kakhulu ekubeni ukwazi ukuthola imali eningi ngesikhathi esifushane kakhulu. Ngengozi ekusebenzeni okuhlala kungabonakali. Kuze kube seqophelweni lokuthi akuzona ukunyakaza okufanele wonke amaphrofayili yabatshalizimali abancane nabaphakathi. Uma kungenjalo, ngokuphambene nalokho, kufanele ube nokuhlangenwe nakho okuhle kulolu hlobo lokusebenza ngezimali zomhlaba wonke. Ngaphandle komsebenzi wayo omkhulu kulezi zinsuku futhi ikakhulukazi maqondana ne-euro.
Imali engenayo engaguquki: abasengozini kakhulu
Kepha akungabazeki ukuthi izimakethe zemali engenayo ezingaguquki yizo ezithinteka kakhulu yiziphithiphithi ezweni laseLatin. Akumangalisi ukuthi inzuzo ye- ivawusha yase-Italiya inyuke kakhulu kulezi zinsuku. Ukufika lapho kuthinta khona inzuzo yamabhondi wangaphandle. Ngokwenzayo, lokhu kusho ukuthi izimali zokutshala imali zalezi zici zilahlekelwa ukuncintisana njengoba zihlupheka ngokweqile kulolu hlobo lokunyakaza ezimakethe zezezimali. Kulesi simo, ngeke kube khona okunye abangakwenza ngaphandle kokubalekela imali engaguquki yokutshala imali esekwe emazweni angaphandle. Lapho i-Italy ingenye yezinto ezibaluleke kakhulu ekugxilwe kuzo.
Lesi sigaba sezimali ezihlanganyelweyo sehla ngamandla amakhulu. Ngamaphesenti angathandeki adlula lokho kwezimali zokutshala imali eziguqukayo. Ngalo mqondo, kuphephe ukubekwa ezimakethe zamasheya kunangeniso engaguquguquki ngalesi sikhathi. Ngaphezu kwalokho, eminingi yale mikhiqizo yezezimali ikhona kuhlanganiswe nezinye izimpahla zezimali lokho kunganciphisa ukulahleka okungenzeka kube khona ezikhundleni zakho. Awukwazi ukukhohlwa ukuthi izimali zokutshala imali zalezi zici zingenye yezilahleko ezinkulu zalokho okungenzeka e-Italy kusukela manje kuqhubeke.
Thola amamodeli ahlukile
Yebo, uma unikezwe lesi simo esiyinkimbinkimbi, akunqatshelwe ukuthi ukhetha uchungechunge lotshalo-mali olubhekwa njengezinye izindlela. Ngokwezinga lokuthi bangasebenza njengamagugu okuphephela kulesi simo sezepolitiki esidalwe ngaphakathi kwesimo sendawo esivamile saseYurophu. Enye yazo imelwe yigugu eliyigugu le-par par, njenge oro. Ngaphezu kwalokho, kudlula esimweni sobuchwepheshe esithakazelisa kakhulu ukukuhlola lapho kuvulwa izikhundla. Akumangalisi ukuthi inamandla wokubuyekeza athakazelisa kakhulu ongawasebenzisa njengamanje.
Enye inketho okufanele ubhekane nayo kulesi siphepho ezweni elingumakhelwane yenziwe ngokusebenzisa i- izimali ezihlanganyelwe ezisuselwa ekuguquguqukeni. Ngoba bangasebenzisa ngokunenzuzo isimo esingesihle sezimakethe zokulingana. Yize kunomkhawulo ekuphelelweni yisikhathi kwezikhundla njengoba uzibeka engcupheni yokuziyeka, njengoba abatshalizimali abancane nabaphakathi bephikisana embizeni yabo. Ngaso sonke isikhathi lapho abaphathi sebethuthukise izimali zalezi zici futhi ezimakethwa ngaphansi kwemingcele ehlukene yenzuzo nokuthi kungani bengakusho, futhi njengecebo lokutshala imali.
Ukutshalwa kwezimali emafutheni
Ekugcineni, kukhona nendawo yokugcina izikhala ezintweni zokusetshenziswa ezinjengowoyela uqobo, othuthukisa umhlangano omkhulu kakhulu wezinkunzi. Ngenani eliseduze nama-dollar ayi-80 umphongolo. Futhi nokuthi ungavula izikhundla ngezinkampani zikawoyela ezisohlwini lwezinkomba zamasheya zamanye amazwe. Ukufika ezingeni lokuthi kungaba elinye lamavelu anconywe kakhulu kulo nyaka okhona. Ngokwesibonelo, I-Repsol okuhlanganiswe nokulingana kweSpain.
Noma ngabe ikuphi, kungenye yezindlela ezinenzuzo enkulu uma ufuna ukwenza imali enenzuzo lapho ubhekene nezinxushunxushu zezombusazwe nezenhlalo ezingakhiqizwa kuleli zwe elibalulekile laseYurophu. Akumangalisi ukuthi inzuzo enikezwa yile mpahla yezezimali okwamanje izinombolo eziphindwe kabili. Okuthile ezinye izinhlobo zotshalo-mali ezingakunikeli, ngisho nemakethe yamasheya ngokujwayelekile. Yize okubi kunakho konke ukuthi kungenzeka kube sekwephuze kancane ukungena ezikhundleni zabo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Imiphumela yokutshalwa kwemali kahulumeni omusha e-Italy
Ngazi kanjani ukuthi nginebinzana laphansi?